Kulesi Sizini, Ngeza Ukuvuselelwa Okusha Kwezembatho Zendabuko - Isitayela Seceleb
Kulesi Sizini, Ngeza Ukuvuselelwa Okusha Kwezembatho Zendabuko
I-Fit, ifomu nama-ensembles ahlanjululwe yinto yokuqala eyodwa wonke umuntu ayikhethayo kule sizini ukwenza isitatimende esijwayelekile. Izingubo ezenziwe ngokwendabuko ngokungangabazeki zinikeza ukuthinta okuhle ekubukeni kwakho nge-vibe ehlaba umxhwele. Zakhiwe ngesakhiwo ukuze zenze umthelela omuhle.
Ukuhlelwa okuhle noma ukufinyelelwa kwezinto kungahle kuholele engutsheni enesitayela. Njengoba izingubo ezenzelwe bona zivamise ukwakheka, azinamahloni futhi zinika ukubukeka okubukhali nokubi. Izingubo ezibunjiwe zingaba kusuka kumasudi afanele kuya kumahembe ngisho ne-LBD.
Isitayela ngezindlela ezimangalisayo ezingafaniswa kalula ukudala ukubukeka okuhlelekile noma nokubukeka okungajwayelekile. Osaziwayo abadumile nezithonjana zemfashini bathathe lo mkhuba ngokuphawulekayo ukuze bakhe ukubukeka okuthakazelisayo. Amasudi afanelekile ahlelwe nge-sweatshirt ukudala ukubukeka komgwaqo kuma-blazers anezitayela ezinamabhulukwe ukunikeza ukubukeka okuhlelekile kwe-chic.
Lawa ma-ensembles aphakamisa ukubukeka konke ngokunaka kwawo imininingwane eyakhiwe nokwakheka. Zenzelwe ukunika ukubukeka okunamandla. Ukuyiguqula isuke engutsheni evundile enezimbali namakhadigigdi afakwe kahle kule sizini, abenzelwe yona banomzuzu omkhulu njengamanje! Abaklami abanjengo-Alexander McQueen nabanye abaningi benze umjaho ama-ensembles akhethekile lapho izingubo ezenziwe zangcono zibuse kakhulu. Ukungeza imibala ekhanyayo, ukuphrinta okumangazayo nama-silhouettes amangalisayo ukwenza isithombe esigqamile.
Skrolela ngezansi ukuze uthole ukwehla kokunye kwengubo enhle eyenziwe ngendlela ongabheka ngayo amanothi ukuze uthathe umdlalo wakho wemfashini uye ezingeni elisha.
Priyanka chopra UJonas
U-Priyanka Chopra Jonas ubukeka njengombono kuleli qoqo eliphuzi. Impela uyazi ukuthi angabheka kanjani ukunambitheka kwakhe okunemfashini.
Thatha ukunaka ku-Deepika Padukone ngokuthi ungabethela kanjani ingubo eyisisekelo emnyama eyenziwe ngeklasi nokuzola. Buhle kangakanani ubucwebe.
USupermodel, uGigi Hadid wenza isitatimende se-chic kumculo wakhe owenzelwe wona. Awukwazi ukususa amehlo ethu kuye.
UBella Hadid ubukeka engenaphutha eqenjini eliphrintiwe. Izinketho zakhe ezinesibindi zihlala ziveza isithombe esinesibindi.
U-Alia Bhatt uyindlovukazi uma kukhulunywa ngokufaka isass futhi kumnandi engutsheni. Iqoqo leMoschino livula amandla nenjabulo futhi siyalithanda.
U-Bella Hadid ukhipha intombazane epholile i-vibe ekubukekeni kwakhe kwasemgwaqweni. Ukuhlanganiswa kombala nezitayela kusenza sifune ukutshala imali ku-ASAP eyodwa!
Isithonjana senkanyezi uKareena Kapoor Khan wenza icala eliqinile kulokhu kubukeka okuhle. Ukwenza amakhanda ajike.
Linga ngokubeka ingubo yakho yakudala efana neBrittany Xavier emangalisa. Bhala amanothi!
U-Olivia Culpo kuleli qoqo elimangalisayo ufakazela ukuthi izingubo ezenziwe ngendlela efanele zingavuselelwa ngokumangalisayo. Ukuthanda umbala ogqamile oluhlaza
USonam Kapoor Ahuja ubulala kule nhlangano enhle kakhulu. Ngokuqinisekile okuqaphelekayo futhi okumangazayo kufanele kube nocezu
Funda futhi: Thatha Izinkomba Ezivela KumaCelebs Aphezulu Wokuthi Ungayishaya Kanjani Kakhulu, Ukuphrinta Okuqhakazile
amathiphu wobuhle kwabesifazane abenziwe ekhaya